Kuvhura KweCannabis Dispensary muIllinois? Verenga zvese nezvazvo apa.
Nzira yekuvhura sei cannabis Dispensary?
Kuvhura cannabis disensary kurota nevakawanda vanofemerwa neruvara rwegirinhi mune cannabis sezvo yakawanda uye yakawanda nyika zviri pamutemo. Iyo bhizimusi reCAN cannabis rinotarisirwa kukura kubva pamabhirioni makumi maviri muna 20 kusvika makumi masere emadhora panosvika makumi maviri nemakumi manonwe zvichidarika. Nhasi, isu tichaisa pfungwa pakuvhura iyo cannabis disensary mumusika uri kubuda weIllinois.
Muna 2019, Illinois yakava nyika yegumi nemaviri kunyoresa pamutemo zvekunakidzwa cannabis. Yaivawo yenyika yekutanga kuzadzisa izvi kuburikidza nemutemo. Ikozvino pane makumi mashanu neshanu magweta ekurapa ekurapa cannabis mudunhu, sezvo kurapwa kwecannabis kwave kuri pamutemo kubva muna 11.
rezinesi rekuparadzira Illinois
Illinois ichaburitsa makumi manomwe nenomwe marezenisi ekushambadzira e cannabis ekutengesa kune vanonyorera muna Chivabvu 75 (yakanonoka kusvika munaGunyana), nezvikumbiro zvakawanikwa kubva muna Gumiguru 2020. mukana unobhadhara. Nekudaro, kuvhura nekumhanyisa cannabis dispensary iri bhizinesi rakaoma bhizinesi.
Kuvhura dispensary kunoda kufunga kwakawanda, kutevedza kwakawanda mirau uye kwakakura huwandu hweruzivo. Kana iwe uine izvo zvinotora, pano iyi yakazara gadziriro yekuti ungazarura sei disensary muIllinois.
1. Gadzirira Chirongwa Chemabhizimusi
Ndeupi mubvunzo unonyanya kukosha uyo cannabis disensary bhizinesi zano uchapindura?
Yakadii kuvhura cannabis disensary?
Iwe uchazoda chirongwa chebhizimusi kana iwe ukatsvaga kuvhura cannabis disensary muIllinois. Pane zvakawanda zvinoverengeka izvo chirongwa chako chebhizinesi chinofanira kufukidza. Izvi zvinotsanangurwa zvakadzama pasi apa:
Chigadzirwa / Shumiro Tsanangudzo - Izvi zvine chekuita nehurongwa hwako hwekuita iyo cannabis disensary uye yakasarudzika zvinhu nezvayo. Edza kuva wakatsiga sezvinobvira. Sanganisira iwo madhezheni eruva iwe aunozopa uye kwaunobva nawo.
Msika Wotsvaga - Ichi chikamu chinosanganisira nzira dzawaishandisa kuona vavatengi vavanoda uye kuti iyi data ichaita sei kushambadzira kwako, mashandiro uye mitengo. Nguva dzose shandisa nhamba dzekongiri (zvine hungiso dzakasimbiswa nemutatu) pane fungidziro.
Vakwikwidzi - Inosanganisira ruzivo kune mamwe mabhizinesi aunokwikwidza nawo, zvakananga kana zvisina kunanga. Ndeapi masimba avo uye kushaya simba, uye unoronga sei kusiyanisa bhizinesi rako.
Hutungamiri hweVatungamiriri - Ichi chikamu chinosanganisira chidimbu chezvaunokwanisa uye izvo zveboka rako revatariri. Iwe unogona kusanganisira bhizimusi rekuvandudza ruzivo mune zvimwe zvikamu, hunyanzvi hwekutungamira kana basa revatengi.
Vezvemari - Ichi chikamu chinogona kutyisa. Izvo zvinosanganisira kugadzira bhajeti rakajeka uye rakajeka. Iwe unofanirwa kusanganisira yenguva refu (taura makore mashanu) fungidziro yemari inosanganisira mari yekushandisa, mari yekutengesa mitezo uye yakafungidzirwa gore remari.
Mhedzisiro yemari inoitiswa nekufungidzira kuti yakawanda sei chigadzirwa iwe chaunofunga kuti iwe uchatengesa mutengo wekugadzira, mutengesi, uye mutengo unoenderana (muripo, renji, kutakura, nezvimwewo). Iwe unogona zvakare kusanganisira yekuzorora-kunyange kuongororwa, uine inofungidzirwa yekutarisira nguva kusvika pundutso.
Illinois-yakananga Zvinodiwa - Unogona kusanganisira ruzivo rwekuvhara yako chengetedzo masisitimu, yakachengeteka chigadzirwa kutakurwa, chigadzirwa kutevedza, marara kuronga nezvimwe zvinodiwa nenyika. Ziva kuti izvi zvinogona kuverengerwa mukushandisa kwako.
Investor Proposal - Inosanganisira kuti iwe uchakoshesa sei masheya ako kana ukapa chirongwa chako kuvaridzi. Bvunzana neCPA kuti uve nechokwadi chekuti uri kuyenderana nenyika uye nemitemo yemubatanidzwa.
2. Wana Cannabis Retail License
Kuwana rezinesi rekutengesa cannabis muIllinois, kana chero imwe nyika kunogona kuomesa nekudhura. Iyo Illinois Dhipatimendi reMari uye Professional Regulation (DFPR) inopihwa basa ne cannabis rezinesi muIllinois. Iko kune zvinodiwa zvakadzama kune avo vangangove varidzi vemabhizimusi.
Vanonyorera vanofanirwa kuongorora chekumashure, kuburitsa mutero wakazara wemakore apfuura uye kuburitsa pachena chero kubhuroka kana kukanganisa pamari yemudzidzi, yemamony kana yekutsigira kwemwana. Iwe unofanirwa kuendesa inoenderana nevakuru-shandisa kugovera sangano rezenisi kunyorera pamwe chete isingadzorere madhora zviuru zvishanu mubhadharo. Paunongobvumidza mvumo, kune $ 5,000 yemvumo yekubhadhara kwemwedzi gumi nemaviri yekutanga.
Kubvumidzwa kwegore rega kubvumidzwa kunoda $ 30,000. Unodikanwa zvakare kuratidza madhora zviuru makumi mashanu mu escrow uye kuratidza capitalization yakakwana. Ziva kuti kune mimwe miripo yekuwedzera inoenderana nekushandisa cannabis disensary.
Izvi zvinosanganisira madhora makumi maviri nemashanu emadhizaini kuvandudza kunyoresa kuvandudza uye madhora makumi mashanu (rimwe nerimwe) rekuparadzira mumiririri wekuvandudza, kadhi rekuzivikanwa nekadhi rekunyoresa kutsiva. Illinois cannabis disensary rezenisi kunoenderana ne 25,000-point system. Pazasi ndedzimwe nzira idzo makosi akapihwa:
Kuchengetedza uye kurekodha-kuchengetedza
Chirongwa chebhizinesi, zvemari, pasi gadziriso uye chirongwa chekushandisa
Kukodzera kwehurongwa hwekudzidzisa vashandi
Cannabis-inoenderana nezivo / ruzivo
Basa uye Maitiro evashandi
Izvo zvakakosha kuziva kuti iwe uchashandisa zviwanikwa zviwanikwa pane mutemo kutevedzera, uye iwe unofanirwa kuronga kumberi kune izvi.
Unoda Kuvhura Dispensary
3. Tsvaga Yakakodzera Nzvimbo kune Dispensary Yako
Iyo 75 yekudzokesa cannabis marezenisi ekutengesa kuti apiwe muI Illinois yakakamurwa pakati pemamwe gumi nemana Bureau of Labor Statistics (BLS) matunhu. Izvi zvakaitwa kuti zvive nechokwadi chakakomberedza geographical kuparadzirwa kwe cannabis dispensaries. Zvinoreva izvi ndechekuti yako disensary inofanirwa kuwanikwa mukati meBSS nzvimbo yakatsanangurwa pane rako rezinesi rekushandisa.
Kana raisensi yako yabvumidzwa, unongova nemwedzi mitanhatu (mazuva zana nemakumi mapfumbamwe nemashanu) kusarudza nzvimbo yepanyama yeyako cannabis disensary chitoro. Nzvimbo yacho inofanira kusangana nezvimwe zvinodiwa. Izvo zvakatsanangurwa pazasi:
Inofanirwa kunge yakakodzera kuwanikwa neruzhinji
Inofanirwa kuve neyakagadziriswa iyo inobatsira kuchengetedza kugovaniswa kwe cannabis
Inofanirwa kuve yakakwana muhukuru, magetsi, kugoverwa kwemagetsi, kubata zvigadzirwa nekuchengetedza
Inofanirwa kuve neyakakwana yokupaka uye yakaremara-inowanikwa yekupinda uye inobuda nzvimbo.
Haifanire kunge iri mukati memamirioni emimwe yeimwe cannabis disensary, chikoro, nzvimbo yekugara kana nzvimbo yekunamatira.
Tichipiwa izvi zvinodiwa, kugadzira gwaro rekunyunyuta kunogona kuita chero kubva pamadhora mazana matatu kusvika kumamirioni zvichienderana nehukuru, mamisirwo uye kuoma. Izvo zvakakoshawo kuve nechokwadi kuti muridzi weivhu panowanikwa disensary yako zvakanaka nemabhizimusi ebhizimusi. Vamwe varidzi vezvivakwa vanogona kusatsigira bhizinesi rine-cannabis nekuda kwekudyara kusiri pamutemo, zvinogona kuve nemhosva kana kumanikidzwa kubva kumutemo.
4. Tora Chigadzirwa Chako
Zvinoenderana nemutemo weIllinois, cannabis disensary inodikanwa kuti ipe assortment yezvigadzirwa kubva kune akasiyana cannabis kurima masangano. Iyo hesera iripo yekutengesa kunzvimbo yako kubva kune imwe chete murimi haufanirwe kupfuura makumi mana muzana ezviwanikwa zvako zvese. Izvi zvinova nechokwadi kuti vatengi vako vane akakwana akasiyana. Izvo zvakare zvinoodza varimisi kubva chete kungotengesa zvigadzirwa zvavo kana vatangisa mabhaisari.
Dzimwe dzinoda kuti makanzura anokura iwo cannabis. Sezvineiwo, izvi hazvisi izvo zvinoita Illinois. Nekudaro, iwe unogona kutarisa maziso ako pakugadzira nzvimbo yekudyara kana yako dispensary ikatanga. Icho chiitiko chakanaka kuendesa yako cannabis mune dzakasiyana mafomu. Vatengi vakasiyana vachasarudza chigadzirwa chakasiyana senge edibles, kuomesa, dabs kana mafuta.
5. Shamba Cannabis yako Dispensary
Soko inosanganisira yekutarisa kuti chii chinomisa bhizinesi rako parutivi uye kuti unoita sei kuti izvi zvizivikanwe kune vatengi zvigadziko Nekudaro, kushambadzira cannabis disensary ine nuances yayo iyo iwe yaunofanirwa kuve uchiziva. MuI Illinois, haugone kuita kushambadzira izvo zvinotsausa kana kunyepa, inokurudzira kushandiswa kwakawanda kwe cannabis, inosanganisira mifananidzo yemashizha kana bhuti kana inoratidza chaiyo yekushandisa kwechigadzirwa.
Iwe haugone zvakare kuita mishonga yekurapa kana yekurapa nezve chako chigadzirwa kana kushandisa mifananidzo inogona kufadza vana (katuni, mhuka dzinovaraidza kana matoyi). Zvakare, iwe haugone kushambadza yako dispensary pawairesi, terevhizheni kana mota yeruzhinji yekufambisa. Iwo akanakisa kushambadzira mapuratifomu e cannabis dispensaries anosanganisira mawebhusaiti, zvemagariro nhau, nharembozha (Leafly uye Weed Map), magazini uye kuvimbika / kutumira zvirongwa.
Zvinodiwa zvekutenga mbanje zviri pamutemo muIllinois kuDhipatimendi
Muna 2013, iyo nzimbo yeI Illinois yakaita kuti mbanje iwanikwe nevarwere vanoida iyo dzakasiyana siyana dzekurapa. Nyika yakatanga chirongwa chekutyaidzira uye vakaatumidza zita rekuti Compassionate Use of Medical Cannabis. Runyoro rwevarwere rwakanyorwa kumusoro uye varwere vanokwanisa pamwe nevanochengetwa savanotarisirwa vaizochengetedzwa pakupomerwa uye kusungwa.
Izvozvi zvaita 2019 uye nyika iri kuita mbanje kunyange kuwanikwa. Bumbiro remutemo rinozoita kuti vanhu vatenge, kutakura nekutengesa mbanje rinoiswa kuti riite. Bhiri iri, rinova rakagadziriswa remutemo wepamberi nezve mbanje, richadzora mbanje nenzira imwe chete nedoro uye dzichibvumidza kushandiswa kwevanhu vanopfuura makore makumi maviri nemasere.
The Cannabis Regulation & Mutero Mutero inotsanangura mhando yevatengi iyo mbanje dispensary inobvumidzwa kuenda kuiri. Vagari vemuI Illinois vachakwanisa kutenga mbanje yemitambo yekuzvivaraidza asi ine zvinotevera zvirevo.
1. Ratidza chiratidzo chezera usati watenga.
2. Kutengesa, kuendesa kana kuendesa mbanje kuvana kunoramba kuri mhosva.
3. Kutyaira pasi pesimba re cannabis kucharamba kuri zvisiri pamutemo.
4. Kutengeswa kwecannabis kuchaitwa nenzira yakatenderwa nekubhadhara vagari.
5. Cannabis ichaongororwa uye kunyorwa zvakakodzera kuti ibatsirwe nemushandisi.
6. Vatengi vanozopihwa neruzivo rwese rwuripo nezve chero chipi zvacho chakashata mhedzisiro yekushandisa cannabis inotsigirwa nekutsigira-kwakavakirwa kutsvakiridzo.
Tarisiro yekuwedzera bhizinesi
Nemutemo mutsva wakaiswa kuti utore kushanda munguva pfupi inongova nyaya yenguva pasati indasitiri ye cannabis isimukira kuita indasitiri yemabhiriyoni akawanda. Vagari vanokwanisa kutora mukana iwo marezinesi akasiyana-siyana ayo anofanirwa kupihwa kunze kwevarimi uye varidzi vemabhiza. Kuenda nezvinofungidzirwa mubhiri idzva iri tarisiro chaiyo yekuti Illinois inogona kuzoita nzvimbo yekutandarira uye hapana kutaurira mikana mishoma ingasimudza muitiro.
Iwe unowana sei iyo disensary rezinesi muIllinois
Kune matatu marudzi emarezinesi ari pasi pechikamu chemugadziriso anotsanangura nzira iyo vanhu bhizinesi vanogona kupa mbanje muhurumende. Izvi zvitatu zvinosanganisira;
1. Iyo yekutanga Kubvumidzwa Adult Use Dispensing Organisation License.
2. Iyo Inemamiriro Evanhu Vakuru Shandisa Dispensing Sangano License.
3. Iyo Adult Use Dispensing Organisense License inowanzozivikanwa seinongo disensary rezinesi.
Nhungamiro dzeKutanga Kubvumidzwa Adult Use Dispensing Organisation License.
Iyi ndiyo rezenisi revatambi vechero cannabis vakapihwa pasi peCompassionate Use of Medical Cannabis Pilot Chirongwa. Kunyorera vanonyorera marezinesi vachakumbirwa kubhadhara mari yekubhadhara madhora zviuru makumi matatu (isingadzoreredzwe). Iwe unozodiwa zvakare kune iyo isingadzorere mubhadharo wekuvandudza bhizinesi re cannabis iro zvakare risingadzoserwe. Mari yacho ichabhadharwa pazvikamu zvitatu kubva muzana zvevatengesi kuburikidza nemwedzi waChikunguru 30,000 kusvika Chikunguru 3 kana mubairo wemadhora zviuru zana nemakumi mashanu emadhora. Yo achadawo kuratidza chitupa cheSocial Equity inclusive Planning.
Nhungamiro yeChimiro Chekushandisa Dispensing Sangano License
Rezinesi rinopihwa uchishandisa merit system umo vanonyoreswa-chepamusoro vanyori vanopihwa rezinesi. Izvo zvakakosha kuti uzive kuti rezinesi haritenderi kutengesa kana kutenga cannabis kana zvigadzirwa zvakamisikidzwa ne cannabis. Vaya vanogamuchira rezenisi vachange vaine mazuva mazuva zana negumi kubva pazuva rekubvumidzwa kuti vaone nzvimbo yavanofunga kumisikidza chitoro chavo chetemberi.Imvumo yakaunzwa yekudzikisa mari inobhadharwa nemunyowani mutsva yekubatana neindasitiri uye ine mari isingadzoserwe yekubhadhara mari inoita zviuru zvishanu zvemadhora. Vanopa marezenisi vanofanirwa kuvandudza marezinesi avo pagore pagore pamutengo we zviuru makumi matanhatu zvemadhora. Pakazosvika May 180 nyika inotarisira kunge ichinge yapa makumi manomwe neshanu marezinesi akadaro.
Nhungamiro dzeAdult Use Dispensing Organisation License
Iyi ndiyo rezinesi ine mapato ese anofarira. Reisensi yacho ichabvumidza mabhizinesi ane hukama kuti atenge cannabis kubva kuvarimi vekugadzira hunyanzvi, nzvimbo dzekurima, masangano ekugadzirisa kana mamwe ma dispensaries. Nerudzi rwuno rwezinesi marezenisi ane mwenje wakasvibira wekutengesa cannabis uye wakazvimisira zvigadzirwa, paraphernalia, mbeu kune vamwe vatengesi kana vatengi. Izvi zvakare zvichave nechemberi kutengesa kune varwere vanoshandisa cannabis kurapa mamiriro ekurapa.
Kuti unyorere marezinesi vanhu vanofanirwa kubatana nemari isingadzoserwe yekubhadhara madhora zviuru makumi matatu. Kana raiti ichinge yapihwa, makanzura anozofanirwa kuwana mutsva mushure megore uye izvi zvichidhura madhora zviuru makumi matanhatu. Rezinesi rakadaro rakatopihwa mudunhu rese neDhipatimendi kutarisira kupa mamwe marezenesi zana nemusi wa 30,000 Zvita 60,000.
Zvirongwa zvebhizinesi iwe zvauchazoda kuti utore reDhipatimendi rezinesi
Iko kwakasimba maitiro ekufunga iwe paunogadzirira kuita yako application se cannabis dispenser. Kana iwe uri kutsvaga kunyorera rezinesi ipapo iwe uchazoda zvinotevera bhizinesi zvirongwa;
1. template yehurongwa hwako hwemari
2. Chidimbu chechirongwa chako chekushambadzira
3.Setemplate yemarekodhi emurwere
4. template yechirongwa chekuchengetedza
5.Template yekukodzera kwechirongwa chakatsanangurwa
6. Chidimbu chechirongwa chevashandi
7. template yechirongwa chayo chekudzidzisa varwere
8.Setemplate yekuraira kutonga
9.Template yekushandisa chirongwa
JB Pritzker pavakakunda chigaro chegavhuna yenyika yeIllinois muna 2018, vateresi vemitemo vakakurumidza kugadzirisa zvavakaita kuti vadzinge kudzoreredzwa kwemutemo mbanje. Kubvisa mbanje pane iyo yakarambidzwa zvinhu zvinhu uye kuitora musimboti yaive imwe yemushandirapamwe wekuvimbisa wakaitwa nemubatiri mumazuva ake eishandira.
Kunyangwe sezvo iwo mutemo mutsva wave kuda kugamuchirwa hazvizokanganisa chirongwa che cannabis chirongwa mune chero nzira. Mutemo wacho unotarisana nekuwedzera huwandu hwea disensaries kufungidzira boom mune ye cannabis bhizinesi albeit nenzira inononoka uye inodzorwa. Vanonyorerana mabasa vanofanirwa kuramba vachiwana rubatsiro sezvo Dhipatimendi richiona nzira dzakawanda dzekushandisa iwo manyowani madanho akaenzana kumatunhu ese. Nezvinodiwa zvese zvaunoda kuti ubudirire kuita basa, avo vanoshuva kusvetukira muindastiri vachada musanganiswa wemhanza uye timu yakanaka yekutsigira. Iyo iri kuchinja nguva iri mudunhu re Illinois uye cannabis tsika vanofarira vanogona kutarisira kuwana zvakanakisa mumatombo, zvigadzirwa, cannabis paraphernalia.
Nekurudzira kwakakodzera uye kugona kwezvinhu zvinodiwa, gwara iri rinogona kukubatsira kuti utange bato rakabudirira re cannabis disensary mu Illinois. Izvo zvakakosha kuti uzive kuti maitiro aya anotora nguva kunyangwe iwe uine zviwanikwa. Kupiwa matanho eurezinesi, kutsvaga nzvimbo yakakodzera uye kuvandudza nzvimbo yako yekuchengetera zvinhu kuti isangane nezvinodiwa nenyika, zvinogona kutora zvinopfuura gore. Iyi indasitiri ye cannabis yakarongedzwa zvakanyanya uye kuwana rubatsiro kubva kumaindasitiri, uye nyanzvi dzebhizinesi zvinokurudzirwa.
Nei Iyo Yako Cannabis Kambani Inoda Iyo Kunze Kunze Chezano
Iyo budding yepamutemo cannabis musika ndiyo yakaoma yewebhu yemitemo nemirairo. Iyi mitemo inogona kupomedzerwa pane dzimwe nguva zvekuti dzimwe nyika, sePennsylvania neFlorida, dziri kunetseka kuita zvirongwa zvadzo zvekupa marezinesi. Zvimwe hazvishamise kuti zvimwe ...
Iyo cannabis Proformas yeDispensaries uye Grows Cannabis proformas yemahara uye inokura inokosha kune yako cannabis bhizinesi kuronga. Kune akatiwandei maproforma matemplate anowanikwa online asi chii chinonzi cannabis proforma uye ungaita sei kuti ufungisise chokwadi ...